Maamulka Shabeellaha Dhexe oo xiray Radio Jowhar (Sababta?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Shabeellaha Dhexe oo xiray Radio Jowhar (Sababta?)
25th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wareegtoo uu soo saaray 23-kii bishaan July amar ku siiyey Radio Jowhar oo ku yaalla magaalada Jowhar inuu uga guuro dhisme ay laheyd wasaaradda wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Sida ku cadeyda wareegtada kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Cabid Jiinow Calasow, waxaa Radio Jowhar loo qabaty inuu muddo 24 saac ah uga duuro dhismahaas, isagoo sheegay iney u baahantahay dowladda Soomaaliya oo markii horaba laheyd.
Waqtiga loo qabtay oo aad u yaraa dartiis, uma suuragelin Radio-ga inuu mudadaas ku guuro, waxaana saaka xoog ku galay ciidamo ka socda booliska gobolka Shabeelaha Dhexe, kuwaasoo damiyey Idaacadda, islamarkaana la wareegay dhismaha.
Agaasimaha idaacadda Jowhar, Maxamed Abuukar Caseyr ayaa sheegay in inkabadan toban sano ay idaacaddu dagantahay xarunta, ayna uga guuri karin waqtiga loo qabtay.
Wuxuu tilmaamay inuu qarash badan ugu baxay dib u dhiska xarunta, ayna jirin wax caddeynaya in xilligan wasaaradda beeraha ay u baahantahay xarunta, si ay ugu howl gasho.
Caseyr ayaa sidoo kale sheegay iney xiriir la sameeyeen wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliya, ayana u sheegtay inuu jirin wax codsi ah oo ay u gudbiyeen maamulka Shabeellaha Dhexe, si Radio Jowhar looga saaro dhismahaas.
Maxamed Abuukar Caseyr ayaa sheegay in xarunta idaacadana ay tahay mid uu siiyay maamulkii hore uga jiray gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu guddoomiyaha ka ahaa Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere).
Wareegtada kasoo baxday gudoomiye Cabdi Jiinow ayuu ku sheegay in iyadoo la tixraacayo Codsiga Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliya oo ah in loo baneeyo dhismahaas iyo iyadoo la fulinayo amarka madaxweynaha oo ah in hay’ad kasta ku shaqeyso dhismaha ay laheyd uu soo saaray amarka Radio Jowhar looga saarayo dhismahaas.
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee (NUSOJ) ayaa go’aanka guddoomiyaha gobolka ku sheegay mid aan caddaalad aheyn oo sababi kara inay xiranto idaacadda kaliya ee ku taalla gobolka Shabeellaha Dhexe.
NUSOJ ayaa u jeedisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya inay faragelin ku sameyso go’aanka maamulka gobolka Shabeellaha dhexe.
Halkaan ka aqri wareegtada uu Cabdi Jiinow ku amray Radio Jowhar iney muddo 24 saac ah uga guuraan dhismaha.
Somaliland: Liyu Police Execute 8 Somalilanders